Torolalàna ho anao momba ny fifidianana ho filoham-pirenena 2019 ao Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy
Fampielezankevitra nifantoka be tamin'ny filaminana nasiônaly sy ny fihoaram-pefy ara-pivavahana
Voadika ny 24 Janoary 2020 7:20 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2019)
Ireo mpiasan'ny Komisiona manokana misahana ny fifidianana ao Sri Lanka nitondra ireo vata fandatsahambato, narahan'ireo polisy ny alina nialoha ny fifidianana ho filoham-pirenena tao Kôlômbô tamin'ny taona 2015. Sary nalain'i Chamila KarunaRathne. Fizakàmanana Demotix (7/1/2015)
Handrotsa-bato indray ireo Sri Lankey ny 16 Novambra 2019 hifidy filoha vaovao taorian'ireo herinandro vitsivitsy nanaovana fampielezan-kevitra izay niompana betsaka tamin'ny filaminana nasionaly sy ny fihoaram-pefy ara-pivavahana. Mbola tena anaty fahatairana tamin'ilay daroka baomba nokononkononin'ny Fanjakana Islamika niseho ny Alahadin'ny Paska tamin'ny volana Aprily 2019 teo ny firenena, izay namoizana aina olona maherin'ny 250.
Tonga tamin'ny faratampony ny fifandirana ara-politika nisy teo amin'ny fiarahamitantana nasionaly eo amin'ny fitondrana, Sri Lanka Freedom Party (SLFP) sy ny United National Party (UNP) ny 26 Oktobra 2018 rehefa voahilik'i Ranil Wickremesinghe, praiministra ao amin'ny firenena, ny filoha Maithripala Sirisena, ary nosoloiny an'ilay filoha teo aloha Mahinda Rajapaksa –ka niteraka olana araka ny lalàm-panorenana. Niverina ny filaminana taorian'ny fanapahankevitry ny fitsarana ka namerenana an'i Wickremesinghe amin'ny toerana maha-praiministra azy ny 16 Desambra 2018.
Sirisena no nisongadina ho mpandresy tsy nampozina tamin'ny fifidianana ho filohampirenena tamin'ny 2015, tamin'ny vato 51,28% raha 47,28% kosa ny an'ilay filoha am-perinasa, Mahinda Rajapaksa Rajapaksa.
Ireo mpandray anjara fototra tamin'ny fifidianana 2019 :
Sajith Premadasa avy ao amin'ny United National Party (UNP), ary i Gotabaya Rajapaksa avy ao amin'ny Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP). Sary avy amin'ny Wikipedia. CC BY-SA 4.0
Nahatratra 35 isa ireo kandidà mifaninana ho fidiana ho filoham-pirenena tamin'ity taona ity, ahitàna lehiben'ny tafika efa misotro ronono, moanina Bodista roa, ary andriambavilanitra iray. Na izany aza, roa ihany no tena kandidà mitarika, dia i Sajith Premadasa, Minisitry ny Fanorenan-trano, ny fananganana ary ny raharaha ara-kolontsaina, ary kandidà natolotry ny United National Party (UNP) avy amin'ny praiministra Ranil Wickremesinghe, mifaninana amin'ny sekreteran'ny fiarovana , ny lietnà-kôlônely Nandasena Gotabaya Rajapaksa ilay rahalahin'i Mahinda Rajapaksa kandidà avy amin'ny antoko mpanohitra Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP).
Tsy mitady ny mbola hitondra indray ilay filoha teo aloha Maithripala Sirisena, ary tsy nanohana ofisialy kandidà iray ny antokony Sri Lanka Freedom Party (SLFP), izay tena be mpifidy. Taloha kelin'izay, nilaza izy fa hiditra anaty fiarahana mitantana, ary ny 9 Oktobra no nazava fa hanohana ny Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) an'i Rajapaksa izy.
Nandritra ny fifidianana Sri Lankey 2018, ny Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) tarihan'i Mahinda Rajapaksa no nivoaka ho mpandresy tamin'ny salan'isa 40,47%, raha toa ka ny vondrona politika United National Front (UNF) an'i Ranil Wickremasinghe kosa nahazo vato 29,42%.
Nandray anjara lehibe tamin'ny famotehana ireo Tamola mpihoko sy ny fampitsaharana ny ady an-trano naharitra 30 taona i Gotabhaya Rajapaksa. Matetika izy no nokianin'ny olona amin'ny fandraisany anjara amin'ny fampijaliana, famonoana ary ireo hafa maro fanitsakitsahana zon'olombelona nandritry ilay ady an-trano. Nanoratra tao amin'ny Diplomat i Amresh Gunasingham :
Tsy tian'ny olona any amin'ny ankamaroan'ireo faritra be Tamola any avaratra sy atsinanan'ny firenena i Gotabhaya Rajapaksa, noho ny nitantànany ilay ady an-trano. Ny vondrom-piarahamonina miozolmàna kosa anefa etsy ankilan'izay, mety hizarazara, hoy ny filazan'ny mpandinika. Araka izany, mety hanao izay hahazoana salan'isa betsaka any amin'ny Sinalezy i Rajapaksa, na eto aza, sarotsarotra ihany ny hanao kajikajy toy izany noho ny lazan'i Premadasa, amin'ny maha politisiana avy eny ifotony azy, eny amin'ireo filazambaovao any ambanivohitra any anivon'ireo Sinalezy Bodista .
Niakatra be ny lazan'i Gotabhaya Rajapaksa amin'ny maha-kandidà ho filoham-pirenena azy taorian'ny nanambarany fa tsy vitan'ny fitondrana ankehitriny ny nisoroka iny asa fampihorohoroana fidarohana baomba nitranga ny Alahadin'ny Paska iny na teo aza ny fahazoana fampitandremana mialoha avy amin'ny sampam-pitsikilovana. Nametra-panontaniana ihany koa ny mpanohitra azy mikasika ny fanafoanana ny maha-olom-pirenen'i Etazonia azy.
Fantatra amin'ny fanohanany an'i Shina i Rajapaksa ary te-hamerina ny fifandraisana. Nilaza ihany koa i Rajapaksa fa tsy hanaiky ny fifanarahana nataon'ny governemanta tamin'ny Filankevitra Fiarovana ny Zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana momba ny hanaovan'izy ireo fanadihadiana ny heloka voalaza fa nisy nandritry ny ady an-trano tao amin'ny firenena.
Kanefa i Sajith Premadasa, ilay zanaka lahin'ilay filoha teo aloha Ranasinghe Premadasa , filoha nisy namono tamin'ny 1993, no safidy tsara ho an'ireo Tamola sy ireo miozolmàna vitsy an'isa, izay manome ny ampahefatry ny vato. Mampanantena lalàna mafimafy kokoa amin'ny “fihoaram-pefy ara-pivavahana” sy ny “fampihorohoroana”, hanafoana ny fahantrana, ary hampitombo ny fananan-trano ao amin'ny firenena miaraka amin'ilay teny faneva manao hoe “Trano fonenana ho an'ny rehetra hatramin'ny taona 2025”.
Fanomanana ny Fifidianana
Rafitra fifampizaràna andraikitra amin'ny filoha (semi-presidential) no misy ao Sri Lanka, izay ny filoha no manana fahefana mpanantanteraka amin'ny maha-mpitarika azy ka miaraka mitantana amin'ny praiministra sy kabinetra iray izay nofidian'ny praiministra. Ny parlemanta no mifidy ny praiministra sy ny mpikambana ao amin'ilay kabinetra. Ahitàna mpikambana 225 ny parlemanta, ny 196 fidiana ary ny 29 tendrena mifanaraka avy amin'izay valin'ny fifidianana parlemantera.
Mihoatran'ny 15,9 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana tamin'ireo mponina miisa 21,8 tapitrisa no afaka mandatsa-bato tamin'ilay fifidianana. Hisokatra amin'ny 7 ora maraina (01:30 GMT) ny efitrano fandatsaham-bato ary hifarana amin'ny 5 ora hariva (11:30 GMT). Nandritra ilay fifidianana tamin'ny 2015, nahatratra 81,5 isan-jato ireo tonga nifidy, isanjato avo indrindra tao amin'ny faritra Atsimon'i Azia.
Ahoana ny fomba fifidianana வாக்களிப்பது எப்படி?
Azafady zarao malaky #PresPoll2019 #PresPollSL #LKA pic.twitter.com/zBHPFLo49g
— CMEV (@cmev) 10 Novambra 2019
Misy fitsipika iray tsara ho marihina amin'ity fifidianana ity, raha tsy misy kandidà mahazo vato mihoatra ny 50 %, dia hisy ny fihodinana faharoa eo amin'ireo kandidà nahazo ny laharana roa voalohany ka izay maharesy amin'izy ireo no mahazo ny fandresena.
80 no fitambaran'ireo mpanaramaso avy amin'ireo firenena ao anatin'ny Fiombonambe Eropeana no hanaraka ny fifidianana manerana ireo distrika sivy ao Sri Lanka. Nandefa solontena hanara-maso ny fifidianana ihany koa ny avy ao amin'ny Commonwealth Observer Group (COG) na ny Vondrona mpanaramaso avy amin'ireo firenena miteny sy/na mampiasa ny teny anglisy.
Mihoatra ny 1.300 ireo fiara fitaterana an'ny Sri Lanka Transport Board (SLTB) no natokana ho ampiasaina amin'ireo karazana andraikitra amin'ity fifidianana ity araka ny fangatahana nataon'ny @ECSriLanka . #SriLanka 🇱🇰 #PresPollSL 🗳 pic.twitter.com/a0u5MdGSJS
— Thilanka Rathnayake (@rathnayake27) 14 Novambra 2019
Manara-maso ny vola mivoaka amin'ireo antoko tsirairay milatsaka ho fidiana ihany koa ny Ivontoerana Fitiliana ireo Herisetra amin'ny Fifidianana:
Fanarahamaso ny fandaniana tamin'ny fampielezankevitra nandritra ny fifidianana, teo anelanelan'ny 14 Oktobra 2019 sy ny 10 Novambra 2019. Tabilao maneho ny fiakaran'ny fandaniana ny 9 ka hatramin'ny 10 Novambra.#CampaignFinancesSL #PresPoll2019 #PresPollSL #lka ##අපේසල්ලි #எமது_பணம் #OurMoney pic.twitter.com/8J5wgpkGed
— CMEV (@cmev) 13 Novambra 2019
Fifidianana ho filoham-pirenena ao Sri Lanka 2019 (Wikipedia)
Vohikalan'ny Komisionan'ny fifidianana ao Sri Lanka
Groundviews, asa fanaovana gazety an-tranonkala avy ao Sri Lanka nahazo maripakasitrahana
Ivontoerana Fitiliana ireo Herisetra amin'ny Fifidianana
FANODINANA HORONANTSARY NY HERISETRA MIFANDRAY AMIN'NY FIFIDIANANA AO SRI LANKA
Handatsa-bato amin'ny Asabotsy faha 16 Novambra 2019 hifidy filoha vaovao ny Sri Lankey. Araho ireto torolàlana ireto mba handraketanao amin'ny alalan'ny fakantsarinao na ny findainao ireo tahirinkevitra manandanja ahitàna an'ireo ho mety fandikàna ny fitsipika mifehy ny fifidianana #lka #SriLanka #PresPollSL #video pic.twitter.com/5VjqT7OrRi
— WITNESS Azia-Pasifika(@WITNESS_Asia) 14 Novambra 2019
Vakio koa (amin'ny teny anglisy):
1.Herinandro izay hanova tanteraka ny hoavin'ny Sri Lanka -Profesiora Jayadeva Uyangoda, Ground Views, 11 Novambra 2019.
2.Sri Lanka: Manelohelo ny fifidianana ho filoham-pirenena ny aloky ny ady an-trano -Silvia Mayr, South Asia Democratic Forum, 6 Novambra 2019.
3.Fifidianana ho filoham-pirenena ao Sri Lanka : ireo tokony ho fantatrao – Hannah Ellis-Petersen, The Guardian, 13 Novambra 2019
4.Ao Sri Lanka, vao mainka manamafy ny fisaratsarahan'ny samy hafa finoana ny fifidianana ho filoham-pirenena- Asad Hashim, Al Jazeera, 14 novambra 2019.
5.Ny fiantraikan'ny Krizy ao Sri Lanka amin'ny fifidianana- Devaka Gunawardena, The Wire.in, 10 Novambra 2019.
6.Manahy ireo Sri Lankey mpanao gazety sao vao mainka hiharatsy ny raharaha aorian'ny fifidianana – Bharatha Mallawarachi, Washington Post, 14 Novambra 2019
7.Gota sa Sajith? – Safidy mampijalijaly– Bilaogy iray misy andiany 10 nosoratan'i Nanda Wanninayaka, Bilaogy azy manokana, 13 Novambra 2019
Lahatsoratra Global Voices mifandraika amin'izany :
Miteraka horohoro tao Sri Lanka ny daroka baomba nifanesisesy teny amin'ireo fiangonana sy ireo hotely fandraisambahiny, Aprily 2019
Tsy nampandry fahalemana ary nampisy tahotra teo amin'ireo Sri Lankey nisaona ireo fanafihana atao amin'ny miozolmàna, May 2019
Maminavina “Ny feon'ny vahoaka” : Ny fifidianana parlemantera no hitsara ny krizin'ny praiministra Sri Lankey, Novambra 2018
Torolalàna ho anao momba ny fifidianana ho filoham-pirenena 2015 ao Sri Lanka, Janoary 2015